China SD02007 High Quality 20x20x7mm axail Fan 12V 5V 2007 Mini Kutonhora Fan 12v dc brushless kutonhora inotakurika kufefetedza feni fekitari uye vagadziri | Speedy
SD02007 High yepamusoro 20x20 ...
SA22580-1 230V AC Simba ...
SD02007 Yepamusoro Hunhu 20x20x7mm axail Fan 12V 5V 2007 Mini Kutonhora Fan 12v dc brushless kutonhora inotakurika mweya mweya fan
Muenzaniso Nha: SD02007
Magetsi: 5 V 12V 24V
Kubereka hurongwa: Pfuti Kupa & Dual Ball inobereka
Kumhanya Range: ± 10%
1. Magadzirirwo Chinyorwa Kuchinja Pasina Chiziviso
2. Dhizaini uye Gadzira zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Chimiro: Thermoplastic PBT UL94V-0
Impeller: Thermoplastic PBT UL94V-0
RED WIRE Yakanaka (+)
Nhema waya Negative (-)
Operation Kupisa: -20 ℃ ~ 85 ℃ (Yakajairwa Humidity)
★ KuchengetedzaTemperature: -30 ℃ ~ 85 ℃ (Hwakawanda Humidity)
Hupenyu Nguva: At Ambient tembiricha 25 ℃ uye humidity 65%
Sleeve Kubereka: 30,0000 Maawa
Pfuti Kubereka: 40,0000 Maawa
Kubereka Bhora: 50,0000 Maawa
Fluid Dynamic Kubereka: 100,000 Maawa
★ Polarity dziviriro: Reverse kubatana pane yakatarwa voltage hakuzokonzere chero kukuvara
10000000 Piece / Pieces pamwedzi
★ Kavha Dhata
★ mazwi ekutengeserana:
1. kutumirwa: FOB Shenzhen.
2. Kubhadhara: T / T, Western Union kana Paypal.
3. Lead nguva: 15-30 mazuva anoenderana nekuraira huwandu.
4. Muenzaniso wekutungamira nguva: 3-7 mazuva.
Mune fomu yekutenderera kukwesana, Shandisa zvishoma nezvishoma mumatope ruoko ruoko mabheyari, mu Mabhora maviri mabheyari, saka kukakavara kuri kumusoro Mafuta ekuzora uye ekudhonza zvinodzora anoshandiswa mune ruoko.
Diki, uye hapana dambudziko rekudonha mafuta.
Zvakanakira: yakaderera ruzha, asi kushandiswa kwenguva refu nekuda kwe Kubatsira kwekutakura bhora kaviri hupenyu hwayo hwakareba, Izvo zvinokonzeresa chisimbiso chemafuta, iwo mafuta ekuzora anononoka kubuda, Inokodzera mafeni ane kumhanya kwakanyanya, kusakosha kuri Unoda kuvhura chisimbiso chemafuta uye kuwedzera refu iyo Fengze inobereka chinzvimbo. Ruzha rwacho rwune ruzha. Zviri nyore kupfeka. Hupenyu hwakadzikira pane hwemabhora bhegi.
Yedu zvigadzirwa vari zvakafara zvinoshanda mumhando dzakasiyana dzeminda, senge Computer Kesi, Magetsi Welder, Humidifier / Mhepo Inonatsa, Midziyo Yekumba, zvigadzirwa zvekutaurirana, Zvigadzirwa zvemagetsi, Hofisi Midziyo, Vehichle Sisitimu, Medical Zvishongedzo Zvekushandisa, Imba Yezvivakwa Zvivakwa, Matambi emwenje eUS, UPS Simba Sisitimu, akangwara bidet, Refrigeration indasitiri uye kufefetedza system, IT uye telecom michina, 3D Printer nezvimwe ...
★ Tinogona kuita kutumira neFEDEX, DHL, TOLL, ARAMEX, TNT, POST uye EMS. Iko kurongedza kwakachengeteka uye kwakasimba. Ndokumbira utizivise kana iwe uine chero chakakosha chaunoda.
A1: Ehe, isu tiri nyanzvi kutonhora feni fekitori.
Q2: Chii chinonzi DC Fan uye AC fan?
A2: DC fan iri simba neDC voltage, inogara iri 5V, 12V, 24V, 48V, 60V uye 72V.
AC fan isimba ne AC voltage, inogara iri 110V, 220V uye 380V.
Q3: Ungasarudza sei fan yeDC?
saizi 12025 120x120x25mm
kuyerera kwemhepo 87.77CFM
mhando inotakura kaviri bhora rinotakura
chinobatanidza 4 pini molex 2564
waya 4 waya ine 300mm kureba
basa FG / RD / PWM / Yakatanga Nyoro ……
Q4: Chii chandingaite kana ndikatadza kuwana yakakodzera fan fan mune ye fan fan?
Ndapota taura nesu kune vateveri vakagadziriswa.
*** Kana iwe uchida kumwe kuita kwepamusoro kana kumwe kugadzirisazve, ndokumbira undibate kuti uwane rumwe ruzivo, ndatenda.
*** YeFaira Inotonhorera Fani, Senge: isina hunyoro, inodzivirira mvura, turbocharger, nyoro kutanga, inodzoserwa, kudzora tembiricha, PWM yekumhanyisa kutonga, iyo alarm yeRD uye iyo FG chiratidzo nezvimwe, ndokumbira undibate zvakasununguka, ndatenda.
DC fan fan musimboti:
Zvinoenderana nekutonga kweruoko rweruoko rwaAmpere, kana conductor ikapfuura yazvino, Zhou Huang anogadzira iyo magnetic field. Kana kondakita akaiswa mune imwe yakagadziriswa magineti, inokwezva.
Kumanikidza kana kudzorera, zvichikonzera zvinhu kufamba. Mukati mefeni blade yeiyo fan fan, irabha magineti yakazadzwa nemagineti yakasungirirwa. Yakakomberedzwa nesilicon simbi machira, Iyo shaft chikamu chakakuvadzwa nemaseti maviri emakoriri, uye iyo Horo sensor element inoshandiswa seyunowirirana yekuona chishandiso kudzora boka redunhu, izvo zvinoita iyo ichitenderera shaft.
Iwo maviri seti emakoiri anoshanda akateedzana. Iyo yesilicon simbi jira inogadzira akasiyana magineti matanda. Iyi magnetic pole uye magineti erabha inogadzira simba rinosemesa.
Kana simba rekudzosera rakakura kupfuura iro.
Nekupesana, iwo fan fan anotenderera zvakasikwa. Sezvo iyo Horo sensor element inopa chiratidzo chekuwiriranisa, fan fan inogona kuramba ichishanda, sekushanda kwayo.
Iwo mafambiro anogona kutemerwa zvinoenderana nemutemo waFleming-weruoko rwerudyi.
Pashure: SD02010 20mm Fan 20x20x10mm Dc Fans Kupisa Kutengesa 2010 Kumba Humidifier Kutonhora Fani 20x20x10mm Mudiki Saizi
Zvadaro: PG-12-2 120mm epurasitiki fan guruva firita Kutonhora Fani 40,60,80,90,110,120,172,220,254mm epurasitiki PC Fan Dzivirira Sefa
Kutonhora Dc Mini Axial Fan Fans
Dc Axial Kutonhora Fani
Dc Inotonhorera Blower Fans
Dc Kutonhora Fani
Diki Dc Axial Brushless Frameless Fan
DC FAN SD12038-2 Bhora rinotakura 12038 S7 S9 antmi ...
SD06038-2 6038 60mm 6cm CPU inotonhorera / inverter s ...
SD04020-1 40mm 4cm micro saizi 40x40x20mm 5V / 12 ...
12cm Ac Axial Fan, 172mm Ac Axial Fan, Plastiki Fan Guard, Metal Grill Fan 80mm Chengetedza, Simbi fan fan, Hvac Fan Anodhonza,